ရွှေမြန်မာအတွက် အသိနဲ့သတိ: April 2010
မန္တလေး နှစ် ၁၅၀ ပြည့် ပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွင် တစ်ခန်းရပ်ပြဇာတ်အဖြစ် တင်ဆက်ခဲ့သော မန္တလေးသား စစ်စစ်ကြီး တစ်ခန်းရပ်ပြဇာတ်
အထက်ပါ ဗီဒီအိုကို စာဖတ်ပရိသတ်မှပေးပို့လာပါတယ်။ ဒီဗီဒီအိုကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာမျှဝေပေးတဲ့ကိုချမ်းမြစိုးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by ရောင်ခြည်ဦး (ဘာသာတိုင်းအတွက် အလယ်လူ) at 3:03 PM
ပြည်သူ့အသံ အပိုင်း (၂)
မြန်မာလူမျိုးများအတွက် ဘုရားစေတီပုထိုးတွေသာ များလာတယ် ဘုရားရဲ့အဆုံးမတွေကို လိုက်နာကျင့်ကြံသူတွေမှာ နည်းသထက်နည်းလာတာ သတိထားမိပါတယ်။
ဖုံးကွယ်ခြင်းသုံးပါးထဲမှာ ဘုရားကိုစေတီကွယ်တယ် ဆိုပြီး ပထမဦးစွာ ထည့်သွင်းထားတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ တကယ်တော့ စေတီတွေက ဘုရားကို ကွယ်စေတာ မဟုတ်ပါဘူး.. ဘုရားကိုကွယ်စေနိုင်အောင် ကိုယ့်စိတ်က ရည်မှန်းလိုက်တဲ့ ရည်ရွယ်လိုက်တဲ့ စိတ်ထားတွေကသာ ဘုရားကို စေတီတွေက အလိုလိုကွယ်သွားစေတာပါ။
ဥပမာပြောရရင် ဘုရားဖူးသွားမယ်ဆိုရင် ဟိုဘုရားကတန်ခိုးကြီးလို့ ဒီဘုရားကဆုတောင်းပြည့်လို့ဆိုပြီး ဘုရားရွေးသွားကြတယ်။ အဲဒိရည်ရွယ်ချက်ကိုက ဘုရားရှင်အတွက်စေတနာထားရာမရောက်ပဲ မိမိကိုယ်ကြိုးအတွက်သွားတဲ့ဘုရားဖူးဖြစ်နေပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကိုပြောရရင် ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေမှာ မေတ္တာတရားကိုမကြခဏဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
သံဃာတော်တွေဟောကြားရာမှာလည်း လူသတ္တဝါအပေါင်းအပေါ် မေတ္တာစိတ်၊ စာနာစိတ်ထားရန်၊
တိုင်းပြည်အေးချမ်းသာယာရန် ဟောထားတာတွေရှိပါတယ်။ ဒီတရားတွေဟာ စိတ်ကျင်းမြောင်းတဲ့လူစားတွေနဲ့ မျက်ကန်းမျိုးချစ်အာဏာမက်တဲ့ လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲကိုမဝင်ပါဘူး။ တရားနာတုန်းခဏပါပဲ။
မေတ္တာဓါတ်ကိုနှလုံးသွင်းကျင့်သုံးနိုင်ရင်ဖြင့် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး စော်ကားတာ နှိမ်တာတွေပပြောက်သွားမှာပါ။ ဒါကြောင့်မေတ္တာအလင်းဓမ္မတရား အချို့ကိုရေးပို့လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အလွန်မှကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်။
မေတ္တာဘာဝနာသည် စစ်မှန်တဲ့ဝိပတ်သနာမှတစ်ပါး အကြိုးတရားအကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ ရှင်တော်ဗုဒ္ဓကဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။
မေတ္တာတရားဆိုတာအလွန်ကိုအေးမြတဲ့ဓါတ်သဘောပါ။ လောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာ လောဘမီးတွေ ဒေါသမီးတွေ မောဟမီးတွေ ဟုန်းဟုန်းတောက်ပြီးတော့ မီးလောင်ခံနေတဲ့လူသားအားလုံးကို မိုးရိပ်မိုးစက်သဖွယ် ငြိမ်းအေးသွားစေနိုင်တာကတော့ မေတ္တာတရားပါ။
မန်မာနတွေ လောဘ မောဟတွေနဲ့ညစ်နွမ်းနေလိုက်ကြတာ ရေစဉ်သဖွယ်စင်ကြယ်စေတာကလည်း ဒီမေတ္တာဓါတ်ပါပဲ။ *မေတ္တာဓါတ်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိဘို့ လူတိုင်းမှာရှိဘို့အရေးကြီးပါတယ်။* မိသားစုတိုင်းမှာ မေတ္တာဓါတ်ရှိပြီဆိုရင် နေချင်စဖွယ်မိသားစုလေးဖြစ်နေပါတယ်။ မိသားစုကနေ ရပ်ကွက်မြို့ရွာနိုင်ငံတစ်ခု ဒီနိုင်ငံတစ်ခုမိသားစုကနေပြီးတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးလို့ခေါ်တဲ့မိသားစု ဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးလို့ခေါ်တဲ့မိသားစုကနေပြီးတစ်လောကလုံးအထိ မေတ္တာဓါတ်တွေများလွှမ်းမိုးပြီးတော့လွှမ်းခြုံထားလိုက်ရင်တစ်လောကလုံးဘယ်လောက်အေးချမ်းလိုက်မလဲ ဘယ်လောက်ငြိမ်းချမ်းလိုက်မလဲ။
မေတ္တာဟာဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့သူကိုလည်းအာရုံပြုတာပဲ ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့သူကိုလည်း အာရုံပြုတာပဲ။
*ယုရမှု ပိုက်ထွေးမှု စည်းလုံးညီညွတ်မှုတွေဟာမရှိမဖြစ်အရာတွေပါ။* ကိုယ့်မိသားစုကို မေတ္တာဓါတ်နဲ့လွှမ်းခြုံပြီးအေးချမ်းနေကြသလို ကိုယ့်ရပ်ရွာ ကိုယ့်နိုင်ငံ ဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံပြီးထားရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ။
မေတ္တာဓါတ်အေးချမ်းမှုကိုသူတစ်ပါးဆီကတောင့်တကြတယ် လိုချင်ကြတယ်။ *သူတစ်ပါးဆီကတောင့်တ လိုချင်သလို ကိုယ့်စီက မေတ္တာဓါတ်ကို သူတစ်ပါးကိုလည်းခွဲဝေပေးဘို့စိတ်ရှိရတယ်။*
အဲဒါကြောင့်မိမိတို့မှာတစ်နိုင်တစ်ပိုင်ရှိတဲ့ မေတ္တာဓါတ်တွေကို လူသတ္တဝါအပေါင်းအပေါ်မှာမေတ္တာမိုးရွာဖြိုးပြီးတော့ အေးချမ်းစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ **လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး၊ အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး** မေတ္တာတွေခွဲဝေဖြန့်ပေးနိုင်ဘို့ မေတ္တာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေက ကိုယ့်ရှိတဲ့မေတ္တာဓါတ်တွေကိုပို့လို့ အများတကာတွေလည်းမေတ္တာဓါတ်တွေပို့လို့ အေးချမ်းဘို့ သူတော်ကောင်းတွေရဲ့မေတ္တာတွေကိုပေးနေကြတာကို
မိမိတို့တွေဟာမေတ္တာဓါတ်တွေနဲ့အေးချမ်းသာယာစွာခံယူနိုင်ကြပါစေလို့ မေတ္တာနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ အေးချမ်းပါစေ။
လူမျိုးရေး ပြဿနာက နယ်ဘက်တွေမှာတော့ အဲလောက် မဆိုးဝါးပါဘူး။ ကျမတို့နေတဲ့ နေရာမှာ တရုတ်များတာလည်း ပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ကျန်တာက ရှမ်း၊ ပအိုဝ့် စတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေပါ။ နယ်ဘက်တွေမှာ နေထိုင်ရတာ ငြိမ်းချမ်းပါတယ်။ ငယ်ငယ်က ကျောင်းမှာရော၊ အပြင်မှာရော လူမျိုးရေးကို ထိခိုက်စော်ကားတဲ့သူမျိုးကိုတော့ မကြုံတွေ့ဖူးပါဘူး။ ဗမာလူမျိုးများတဲ့ဒေသတွေမှာ လူမျိုးရေးပြဿနာ ပိုများလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
မေး 1. မြန်မာပြည်ဖွားတွေအတွက် ကိုယ့်နိုင်ငံသားအချင်းချင်း လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အနှိမ်ခံရတာကို ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲ ခံစားချက်လေးတွေပြောပြစေချင်ပါတယ်။
ဖြေ : တစ်နေ့ ဘလော့ဂ်တစ်ခုမှာ "ဒီတရုတ်တွေ ရှုပ်ကို ရှုပ်တယ်။ ကိုယ့်ဘာကိုယ် တရုတ်ပြည် ပြန်ကြတာ မဟုတ်ဘူး။ သူများနိုင်ငံလာပြီး စီးပွားရေးကို အုပ်စိုးနေတယ်။" ဆိုတဲ့ စာသားကို ဖတ်မိတော့ တော်တော် ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။
- ရှုပ်ကို ရှုပ်တယ်ဟု ပြောရအောင် တရုတ်တွေ သူတို့ကို ဘာမှ မလုပ်ပါ။ ကိုယ့်ဘာကို အေးအေးချမ်းချမ်း ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်စားနေတာကို ဘလိုင်းကြီး ကြည့်မရ ဖြစ်နေတာကို မခံနိုင်ပါ။
- တရုတ်ပြည် ပြန်ခိုင်းရအောင် ဘိုးဘွားတွေ လက်ထက်ကတည်းက မြန်မာပြည်မှာ မွေးပြီး မြန်မာပြည်မှာ ကြီးလာကြတာ။ နိုင်ငံသား အနေနဲ့ သတ်မှတ်လက်ခံ သင့်ပါပြီ။
- ဘာသာရေး အနေနဲ့ကတော့ အစ္စလာမ်ကို ထိပါးစော်ကားတာတွေက မကြားချင်မှ အဆုံးပါဘဲ။
မေး 2. ဒီအတွက် မြန်မာပြည်ဖွားတွေ ဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်တယ်လို့ထင်ပါသလဲ။
ဖြေ : မြန်မာပြည်ဖွား မြန်မာလူမျိုးတွေ အနေနဲ့ မြန်မာပြည်မှာ မွေးဖွားကြီးပြင်းလာတဲ့သူတွေကို လူမျိုး ဘာသာ ခွဲခြားတဲ့ အမြင်နဲ့ မကြည့်ဘဲ သဘောထား ကြီးသင့်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ လူတွေ Migrate လုပ်ပြီး ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်နေကြတာကို နားမလည်တဲ့ ရေတွင်းထဲက ဖားသူငယ်လို အမြင်တွေ ဖျောက်သင့်ပါပြီ။
မေး 3. အရိုးစွဲ နုတ်ကျိုးနေတဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေ ဖြစ်တဲ့ ကုလား ကုလားခေါ်တာ၊ တရုတ် ၊ တိုင်းရင်းသားတွေကို အားမနာပ xxxx ခေါ်တာတွေ ပပြောက်သွားမယ်လို့ထင်ပါသလား။
ဖြေ : မထင်ပါ။ လူနည်းစုတွေဟာ အမြဲ လူများစုတွေရဲ့ နိုင်ထက်စီးနင်း လုပ်ခံရတာ မြန်မာပြည်မှာဘဲ မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံတကာမှာ တွေ့နေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယဉ်ကျေးမှု အဆင့်အတန်း မြင့်လာပြီး အမြင်ကျယ်လာကြမယ်ဆိုရင် အနည်းနဲ့ အများတော့ ပပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
Answer 1 : That really discrimination! makes feeling very bad and sad! We are also born in Burma especially we are definitely Burmese. Don't need to racist each other like ka lar, ta yout.
Answer2: Don't need to be racist, discriminate to other people. Don't people let say " low people who have narrow mind living in lowest country". We have to be change our self.
Answer3: I don't think that they change because they are used to it since they born.
အမေရိကန်နဲ့တစ်ခြားနိုင်ငံတွေမှာ မြန်မာတွေပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတာအတော်ကိုများပါတယ်။ အဲဒိအထဲမှာမြန်မာ တိုင်းရင်းသားတွေလည်းပါ ပါတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာကလေးတွေမွေးတယ်။ အဲဒိမှာပဲကြီးပြင်းလာတယ် စီတီဇင်ရကြတယ်။ အိမ်ပိုင်ရာပိုင်၊ အိမ်ထောင်ကြ နောက်ထပ်မျိုးစက်သစ်တွေမွေးပြီးမှ အဲဒိနိုင်ငံသားတွေကအမြင်ကျင်းလာပြီး မင်းတို့မြန်မာတွေ ငါတို့နိုင်ငံမှာရှုပ်တယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံသားကဒ်သက်တမ်းမတိုးပေးတာတို့ နိုင်ငံသားကဒ်မထုပ်ပေးတာတို့ အပြုနဲ့ကော အပြောနဲ့ပါနှိမ်လာရင်၊ နောက်ဆုံးမင်းတို့နိုင်ငံပြန်သင့်ပြီပြောလာတဲ့အခါ အဲဒိမှာမွေးတဲ့မြန်မာမျိုးစက်တွေဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ ကိုယ့်နိုင်ငံကဆင်းရဲနွမ်းပါးလွန်းတော့ နိုင်ငံခြားထွက်တဲ့မြန်မာတွေလည်းများသထက်များလာပါတယ်။ ဘာကိုမှမမြဲဘူးဆိုတာ သတိရှိကြရင် မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်စိတ်အေးရပါပြီဗျာ။
Posted by ရောင်ခြည်ဦး (ဘာသာတိုင်းအတွက် အလယ်လူ) at 6:42 PM
Posted by ရောင်ခြည်ဦး (ဘာသာတိုင်းအတွက် အလယ်လူ) at 4:02 PM
Labels: Myanmar new year
ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမအတိုင်း ပြန်လည်စဉ်းစားတွေးခေါ်ဖို့ လိုအပ်
ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာ သူတစ်ပါးကိုအကြည်းတန်စေတဲ့ စကားတွေနဲ့ ပြန်လည် ချေပရမယ်လို့ မဟောခဲ့ ...လူသတ္တဝါအားလုံးတို့အပေါ်၌ မေတ္တာစိတ်ထားရန်သာဟောကြားခဲ့တယ်... ကိုယ့်နှုတ်ကထွက်လိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်း စာတစ်ကြောင်းဟာ ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမတွေနဲ့ မဆန့်ကျင်နေဖို့ အဓိကလိုအပ်သည်။
Ref : myanmarchat.org
Posted by ရောင်ခြည်ဦး (ဘာသာတိုင်းအတွက် အလယ်လူ) at 1:58 PM
Posted by ရောင်ခြည်ဦး (ဘာသာတိုင်းအတွက် အလယ်လူ) at 7:30 PM